ပဲခူးတိုင်းဒေသကြှီး၊ ပဲခူးမြို့ရှောင်လမ်း၊ ဆင်ဖြူကွင်းသုဿာန်အနီး၊ အကျယ်(၁၁)ဧကခန့်ရှိသော အမှိုက်ပုံ မီးလောင်မှုသတင်း
by MFSD Admin 1 | Apr 5, 2019 | Uncategorized, မီးလောင်မှု, သတင်း
၄.၄.၂၀၁၉ ရက်နေ့၊ (၁၃ ၀၀)အချိန်ခန့်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးမြို့ရှောင်လမ်း၊ ဆင်ဖြူကွင်း သုဿာန်အနီး၊ အကျယ်(၁၁)ဧကခန့်ရှိသော အမှိုက်ပုံမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားကြောင်း (၁၃ ၀၅) အချိန် သတင်းရရှိသဖြင့် ပဲခူးခရိုင်အတွင်းရှိ မီးသတ်စခန်းများမှ မီးသတ်ယာဉ်(၅)စီး၊...
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ဟင်္သာတမြို့နယ်၊ အင်းကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုန်းကြီးကျေးရွာ၊ လိပ်ခုံးကျေးရွာအုပ်စု၊ လိပ်ခုံးကျေးရွာ၊ သာယာကုန်းကျေးရွာနှင့် အညာစုကျေးရွာတို့တွင် လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုသတင်း
by MFSD Admin 1 | Apr 3, 2019 | Uncategorized, ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေး, သတင်း
(၂. ၄.၂၀၁၉)ရက်နေ့၊ (၁၆ ၃၀)အချိန်ခန့်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ဟင်္သာတမြို့နယ်၊ အင်းကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုန်းကြီးကျေးရွာ၊ လိပ်ခုံးကျေးရွာအုပ်စု၊ လိပ်ခုံးကျေးရွာ၊ သာယာကုန်းကျေးရွာနှင့် အညာစုကျေးရွာတို့တွင် လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုဖြစ်ပွားကြောင်း (၂၀ ၂၀) အချိန် သတင်းရရှိသဖြင့်...
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ အုတ်တွင်း မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းမကြီး၊ မိုင်တိုင်အမှတ်(၁၄၆/၀)နှင့်(၁၄၆/၁) အကြား ယာဉ်တိုက်မှုသတင်း
by MFSD Admin 1 | Mar 28, 2019 | Uncategorized, ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေး, သတင်း
(၂၇.၃.၂၀၁၉)ရက်နေ့၊ (၀၆ ၀၀)အချိန်ခန့်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ အုတ်တွင်း မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းမကြီး၊ မိုင်တိုင်အမှတ်(၁၄၆/၀)နှင့်(၁၄၆/၁) အကြား၊ ရန်ကုန် နေပြည်တော်သို့ မောင်းနှင်သော KIA BANGO အမျိုးအစား (အဖြူရောင်) ယာဉ်သည် ရှေ့ယာဘက်ဘီးပေါက်၍ အရှိန်မထိန်းနိုင်ဘဲ...
ကျောက်မဲခရိုင်၊ နမ္မတူမြို့နယ်၊ မန်စံကျေးရွာအုပ်စု၊ မိုင်းမုကျေးရွာရှိ နေအိမ်မီးလောင်မှုသတင်း
by MFSD Admin 1 | Mar 28, 2019 | Uncategorized, မီးလောင်မှု, သတင်း
(၂၇.၃.၂၀၁၉)ရက်နေ့၊ (၁၄ ၃၀)အချိန်ခန့်၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ ကျောက်မဲခရိုင်၊ နမ္မတူမြို့နယ်၊ မန်စံကျေးရွာအုပ်စု၊ မိုင်းမုကျေးရွာရှိ (၃၀×၂၀)ပေ၊ သွပ်မိုး၊ ထရံကာ၊မြေစိုက် နေအိမ်ပေါ်သို့ ရွာအနီး တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း(၂)ဖွဲ့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာ နေအိမ်ပေါ်သို့...
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ သန်လျင်မြို့နယ်၊ မြို့ ဟောင်းအလယ်ရပ်ကွက်၊ မီးလောင်မှုသတင်း
by MFSD Admin 1 | Mar 14, 2019 | Uncategorized, မီးလောင်မှု, သတင်း
(၁၃.၃.၂၀၁၉)ရက်နေ့၊ (၁၁ ၂၀)အချိန်ခန့်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ သန်လျင်မြို့နယ်၊ မြို့ဟောင်းအလယ်ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းလမ်း၊ (၁၈x၅၀)ပေ၊ RC ၂ ထပ်ခွဲတိုက် ပထမထပ်တွင် အဲယားကွန်း ဝါယာကြိုးများ အပူလွန်ကဲရာမှ မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားကြောင်း (၁၁ ၂၄)အချိန် သတင်းရရှိသဖြင့်...
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ သာကေတမြို့နယ်၊ သာကေတစက်မှုဇုန်၊ မြန်မာ့ဂုဏ်ရည်လမ်း၊ အမှတ်(၆၃)ရှိ ထရန်စဖော်မာ မီးလောင်မှုသတင်း
by MFSD Admin 1 | Mar 6, 2019 | Uncategorized, မီးလောင်မှု, သတင်း
(၅. ၃.၂၀၁၉)ရက်နေ့၊ (၁၂ ၃၃)အချိန်ခန့်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ သာကေတမြို့နယ်၊ သာကေတစက်မှုဇုန်၊ မြန်မာ့ဂုဏ်ရည်လမ်း၊ အမှတ်(၆၃)ရှိ (၂၃၇×၁၅၅) ပေရှိ YD အရက်ချက်စက်ရုံအနီးရှိ 750 KVA ထရန်စဖော်မာ ပုံးပေါ်သို့ ကြောင်ပြုတ်ကျရာမှ ထရန်စဖော်မာပုံးပေါ်တွင် တပ်ဆင်ထားသောကြွေသီးဘား...